La cusbooneeyay måndag 16 april 2012 kl 14.05
La daabacay söndag 15 april 2012 kl 21.58
Koboca dhaqaale ee dalka sannadkan eynu ku jirno oo la filayo inuu noqdo 0,50% iyo shaqa la'aanta oo kor u kacda lixda bilood ee sannadka ugu horeeysa ayaa khasbeeysa in dawladdu qaado tallaaooyin taxadar leh ee lagu dhiiri-gelinayo dhaqaalaha dalka sida uu sheegay Anders Borg, wasiirka dhaqaalaha mar uu u waramayay idaacadda la iska daawado ee SVT laanteeda Agenda habeenkii axadda ee ina dhaaftay. Wasiirka dhaqaalaha Anders Borg ayaa fikirkiisa la xiriira miisaaniyadda gu’ga sidan u dhigay:
- Waa inaaan garwaaqsanaa in xaalad culus ey la soo gudboonaan karto dhaqaalaha dalka, islamarkaana aannu awoodeeda leenahay sidii aan u miisaaniyad gelin lahayn dhiiri-gelinta dhaqaalaha dalka.
Borg ayay u muuqataa daruur madow ee hareeynaysa dhaqaalaha caalamka iyo dhaqaalaha waddammada ku midoobay lacagta euro-ga oo saameeyn ku yeelan karta xowliga kobaca dhaqaale dalka ee mustaqbalka.
Kobaca dhaqaale ee sannadka ayay dawladdu saadaalinaysaa 0,4%. Shaqa-la’aanta oo xoogay kor u kacda gaadhana 7,5%, halka miisaaniyadda dawladduna halkii ay ka ahyd miisaaniyad dheeriya ee gaarsiisan 60 milyaard ee koron, gaari doonto naaqus 13 – 14 milyaard ee koron.
Ugu horeeyn miisaaniyadda dayrta ee bisha septeembar ayuu Anders Borg ku talo jiraa inuu soo ban-dhigo miisaniyad la xiriirta dhiiri-gelinta kobaca dhaqaale hadday noqon lahayd maal-gelinta howlaha aasaasiga ee dalka sida waddooyinka xaddiidka. Sidoo kale howlaha cilmi-baarista iyo is-bedellada khidmmadaha kala duwan ee shurkadleyda.
Sannadka 2013 ayaa la saadaalinayaa in dhaqaalaha dalku yeelan doono sawir ka qurxoon midka sannadkan. Iyadoona uu kobaca dhaqaaluhu kor u kici doono, gaarina doono 3% sannadkiiba, halka shaqa-la’aantuna hoos u dhici doonto.
Ma ahan oo keliya xubnaha mucaaradka kuwa dawladda ku dhaleeceynaya firfircoonidarro. Waxaa iyaguna eedayn middaa la mid ah u soo jeedinaya culimada dhaqaalaha ee dawladda ku eedeynaya sababta ay dawladdu faraha uga laabatay maal-gelin ballaaran oo ay ku sameeyso tusaale ahaan waddooyinka xadiidka.
Robert Bergqvist, madax laanta dhaqaalaha ee bankiga SEB:
- Waxay iila muuqatay in dalku leeyahay suurtagal wanaagsan ee maal-geli mustaqbalka. Waxaan ku fekerayaa 10 – 15 sannadood ee mustaqbalka. Waxaa markaa loo baahnaa in deyn la qaato si mustaqbalka loogu maal-gashado. Dalkani ka mid maaha waddammada dhaca bartamaha caalamka wuxuuna kharash badani kaga baxaa waarididda alaabooyinka. Iyadoona ey ka jiraan daldaloollo.
Aaminka lagu qabo dhaqaalaha Iswiidhen ayaa ah mid aad u sareeya, sidaa daradeed wuxuu dalkani ku heli lahaa si jaban, deymo uu ku maal-geliyo howlaha baahida loo qabo, sida ey qabaan dhaqaale-yahanno fara badan. In miisaaniyadda dalku naaqusto sannadka 13 – 14 milyaard ee koron ayaanu u arag caalin Harry Flam oo ka howl-gala jaamicadda Istockholm, mid caqabad ku ah deymaha aan badneyn ee dalkan lagu leeyahay:
- May, xaqiiqdii maya. 13 – 14 milyaard ee koron una dhiganta 0,3% ma ahan xaqiiqdii dhaqaale sidaa u fara badan. Waa dhaqaale aad u yar. Kolka loo baahan yahay isku-celcelin miisaaniyadeed kolka lagu jiro xaalad cakiran ee dhaqaale waxaa loo baahan yahay hoos u dhac miisaaniyad intaa ka badan.
Halka uu wasiirka dhaqaalha Anders Borg ku adkeeysanayo fikirkiisa:
- Kolka uu yaraado welwelka dhaqaale ayey suurtagal noqonaysaa in la maal-geliyo tusaale ahaan howlaha cilmi-baarista, kuwa aasaasiga dalka u ah. Hase yeeshee weli xaaladdaa lama gaarin.